CEO Qantas ao amin'ny COVID, ny vaksininy ary ny fiaramanidina | resadresaka
Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao momba ny dia any Aostralia • Vaovao momba ny fiaramanidina • Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena • Interviews • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • fanarenana ny dia • Vaovao momba ny fizahantany • Dinika fizahan-tany • Vaovao momba ny fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao mivalona
CEO Qantas ao amin'ny COVID, ny vaksininy ary ny fiaramanidina
CEO Qantas ao amin'ny COVID
Home » Lahatsoratra » Interviews » CEO Qantas ao amin'ny COVID, ny vaksininy ary ny fiaramanidina » Page 8
Andao hifantoka raha afaka, amin'ny aceo ao anaty lavaka, toa izany. Ny asan'ny Sunrise. Toa any amin'ny toerana mety hifanaraka amin'ny toe-javatra tery vaovao io ka tsy mila mandalo hubs. Aiza no ahitanao ny fitohizana sy ny fiarovana ny fahalalana izay mitranga isaky ny fiafarany. Misy fanapahan-kevitra horaisinao amin'ny fiaramanidina inona. Ho tonga haingana ve izany? Ary hatraiza ny fahombiazan'ny Sunrise amin'ny resaka fisokafana vaovao ity rehefa tonga eo amin'ny sambonao hafainganam-pandeha ianao?
Ie. Ka, heveriko fa ny famantarana tsara alohan'ny hisokafan'ny trans-Tasman, ny làlana voalohany notadiavin'ny olona tamin'ny hetsika iraisam-pirenentsika dia ny Perth hatrany London. Hitanay fa talohan'ny COVID dia io no làlana iraisam-pirenena mahasoa indrindra amin'ny tambajotranay. Ary mieritreritra izahay fa aorian'ny COVID, ny fangatahana dia ho avo dia avo. Ary izany dia làlana tsara izay hahavita tsara. Saingy mamerina mijery ireo daty [tsy heno 00:36:25] izahay, ry Peter, heveriko fa roa herinandro no nanafarana ny fiaramanidina. Nahavita ny fifaninanana teo amin'ny 777X sy ny A350 izahay. Ary noraisiko ilay A350. Nifampiraharaha tamin'ny Airbus izahay. Efa nanao fifanarahana tamin'ny mpanamory fiaramanidina izahay. Vonona ny handeha amin'ny solaitrabe izahay hanamafisana izany rehetra izany. Ary avy eo, tamin'ny martsa tamin'ny taon-dasa dia namely ny COVID.
Ka hoy izahay, mila mahita antoka kely kokoa isika, misokatra ny sisintany iraisampirenena. Ny lalan-kivoahana avy amin'izany, satria tsy maintsy ataontsika amin'ny tontolo iainana izay ahazoana antoka bebe kokoa mba hahazoana aina ny tsena amin'ny fividianana ny baiko.
Ny tombony dia, tsy dia betsaka ny olona manafatra fiaramanidina amin'izao fotoana izao. Ny slot ho an'ny fiaramanidina rehefa irintsika dia ho eo. Ary rehefa mamerina mijery tranga iray isika, rehefa mijery ny fikarohana, mieritreritra aho fa hisy ny fangatahana mafy ho an'ny olona, ​​araka ny voalazanao fa tsy manidina amin'ny alàlan'ny hubs, manidina mivantana.
Ary heveriko fa paikady lehibe ho an'ny tontolo iainana aorian'ny COVID ity ary zavatra iray izay tohizantsika foana. Saingy tsy maintsy ataontsika amin'ny tontolo iainana mety izany. Ary manantena aho ao anatin'ny taona ho avy, araka ny efa nolazainay, fa ho avy hitsidika azy eo izahay ary handray fanapahan-kevitra momba izany.
Ka mba hanazavana fotsiny izany. Ny fanapahan-kevitra miverina eo ambony latabatra, tokony hatao ve?
Eny, tanteraka. Ny tiako holazaina dia nilaza izahay fa nijanona fotsiny izahay ary niato izany. Tsy nilaza izahay fa namono ilay hevitra. Nilaza izahay fa mieritreritra fa tena stratejika ho anay izany, amin'ny tantaran'ny Qantas. Heveriko fa hoy aho isaky ny folo taona, nanao paikady stratejika lehibe i Qantas ary nandoa 100 taona mahery izy ireo.
Izany amin'ny an'arivony roa dia Jetstar. Jereo fa tsara ho antsika izany. Tamin'ny taona 2010 dia ny Fahamendrehana izany. Jereo fa tsara no nandoa izany ho antsika. Saingy heveriko fa ny hetsika stratejika lehibe 2020 ho antsika dia ho Sunrise. Ary izany dia hametraka an'i Qantas amin'ny toerana izay, ho kaompaniam-pitaterana an'habakabaka voalohany avy any Etazonia nahazo fiaramanidina jet tamin'ny taona 1950. Ny maha-mpitatitra namorona kilasy fandraharahana tamin'ny taona 1970. Nizaha ireo fotoan-dehibe ireo izahay. Faly be izahay fa nitondra an'izao tontolo izao. Ary tena reharehanay ny zava-misy napetrak'i Qantas tao. Saingy heveriko fa iray hafa amin'izy ireo. Ka mbola faly be aho. Tsy maintsy mandresy lahatra ny takelako. Tokony handalo dingana iray isika, handresen-dahatra ireo tompon-tsakaizantsika, ny fampiasam-bola mendrika an'io renivohitra io. Saingy miatrika an'izany aho ary tena manandanja an'izany. Ary heveriko fa efa tokony hisy ny raharaha.
Ie. Afaka mahita fahatsapana betsaka amin'izany aho. Tsara izany. Ary ny zavatra ataony ho anao, mazava ho azy, ny tiako holazaina dia ny fiasan'ny Perth-London, ohatra, tena namokatra be. Ary noho izany, eo amin'ny tsena iraisam-pirenena voageja, heveriko fa azonao atao ny mieritreritra fa afaka mandoa saran-dàlana lehibe ianao amin'izany satria tsy manana toerana hafa haleha ny olona.
Heveriko fa rehefa manao zavatra tsy manam-paharoa ianao, dia manome anao tolo-kevitra momba ny sanda ho an'ny mpanjifa izay tena miavaka, mazava ho azy fa afaka manome vola premium ianao amin'izany. Na fiara maotera Tesla, na inona na inona vokatra. Raha vantany vao eo amin'ny habaka iray izay mahavoa ny fangatahan'ny mpanjifa, ny takian'ny mpanjifa.
Mbola hanana fifaninanana manodidina anao ihany ianao. Ary raha te hijanona amin'ny foibe ny olona ary te hamakivaky an'i LA, te-hamakivaky an'i Dubai, te-hamakivaky an'i Singapore, dia mbola safidy izany any. Fa raha manome vokatra ho toy ny tolo-kevitra tokana lanja ianao. Ary ho an'io volavolan-dalàna momba ny sanda io dia mila premium ianao, izay ataonao satria lafo kokoa ny manao an'io fomba io. Ary avy eo azonao atao ny mitaky izany, ary afaka mahazo tombony amin'izany ianao. Ary izany dia fandresena azon'ny rehetra.
Page 8 ny 8 Prev Manaraka